MSS 1: ဖတ်ရှုခြင်းမှနားလည်လာရခြင်းသို့ - Zomi Adventist Innkuan
၁၉ ရာစု ကျော်လွန်ကုန်ဆုံးသွား၍ ၂ဝ ရာစုနှစ်ရောက်ရှိလာချိန်တွင် အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများ ကြွယ်ဝချမ်းသာလာတော့သည်။ သိပ္ပံပညာအားဖြင့် သော် လည်းကောင်း၊ နည်းပညာများအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း တစ်ဟုန်ထိုး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတော့သည်။ သူတို့အတွက် ရွှေခေတ်ဟူ၍ပင်မှတ်ယူနိုင် သည်။ စစ်ပွဲ၊ သဘာဝ ဘေးဒဏ်၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းများ အဆုံးသတ်တော့မည်ဟု မျှော်လင့်စရာပင်ဖြစ်လာသည်။ သို့သော် ထိုအရာ များသည် မျှော်လင့်ချက် အပိုင်းတွင် သာရှိနေသည်။
အမှန်ပင် ၂ဝ ရာစုခေတ်၌ ထိုသို့သောမျှော်လင့်ချက်မျိုးမှာ မှားယွင်း စေသည်သာမက၊ မိုက်မဲစွာတွေးခေါ်မျှော်လင့်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ မြင်သာ ထင်သာ ရှိနေသော အရာမှာ ယခုကျွန်ုပ်တို့ ၂၁ ရာစုသို့ရောက်ရှိနေသည့်တိုင် ပို၍ကောင်းမွန်လာသောအနာဂတ်လမ်းအတွက် တစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိသေးပါ။
ကမ္ဘာကြီးသည် လှပနေဆဲ၊ တိုးတက်ရွေ့လျားနေဆဲဖြစ်သည်ဟု အမြင်ရှိကြသည်။ လူသားထုကြီးမှာလည်း ယခင်ဘိုးဘေးတို့အတိုင်း လောဘ စိတ်၊ နိုင်ထက်စီးနင်းချင်စိတ်၊ ရုန်းရင်းခတ်ခြင်းစိတ်၊ နိုင်လိုမင်းထက်ပြုချင် စိတ်၊ ကျော်ကြားလိုစိတ်နှင့် မိမိတို့ကိုယ်ကိုပျက်စီးခြင်းသို့ပို့ဆောင်နေမြဲဖြစ် သည်။ တစ်ချိန်တည်း၌ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသောနည်းပညာများတို့သည် လူသားများကိုအကျိုးပြုနိုင်စေသည့်တိုင် ကျွန်ုပ်တို့၏လောဘ၊ နိုင်ထက်စီးနင်း မှု၊ ရာဇဝတ်မှု၊ ကျော်ကြားလိုစိတ်နှင့် မိမိတို့ကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးနေကြသည်။
အံ့ဩစရာအကြောင်းတစ်ခုမျှမရှိပါ။ ကျမ်းစာမှဖော်ပြပါရှိသည့်အတိုင်း ”စိတ်နှလုံးသည် ခပ်သိမ်းသောအရာထက်စဉ်းလဲတတ်၏။ အလွန်ယိုယွင်း သောသဘောရှိ၏။ စိတ်နှလုံးသဘောကို အဘယ်သူသိနိုင်သနည်း” (ယေရမိ ၁ရး၉)၊ သို့တည်းမဟုတ် ”လူမျိုးတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုး၊ တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ ရန်ဘက်ပြုကြလိမ့်မည်။ အရပ်ရပ်တို့၌ အစာခေါင်းပါးခြင်း၊ ကာလနာ များပြားခြင်း၊ မြေကြီးလှုပ်ခြင်းတို့သည် ဖြစ်ကြလိမ့်မည်” (မဿဲ ၂၄း၇)။
သို့ဖြင့် ယိုယွင်းပျက်စီး၍ဘေးအန္တရာယ်များသောအချိန်၌ ကျွန်ုပ်တို့ တွင် ယခုကွာတာအတွင်းလေ့လာကြမည့် ဒံယေလကျမ်းကြီးရှိနေပါသေးသည်။ ”နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကာလအတွက်” (ဒံယေလ ၁၂း၉)၊ ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင် နေထိုင်နိုင်ရန် အထူးပို့ဆောင်ပေးသောကျမ်းဖြစ်သည်။ ဒံယေလကျမ်း၏ သန့်ရှင်းလှသော စာမျက်နှာများအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အားအင်တန်ခိုး၊ ကောင်းကျိုးကောင်းကြောင်း၊ မြဲမြံစေသောယုံကြည်ခြင်းအရာများ ရရှိပိုင်ဆိုင် စေသည်သာမက ဘုရားရှင် အပေါ် ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြင် ယေရှုရှင်ပြန်လည် ကြွမြန်းလာခြင်းကတိတော်ကိုလည်းကောင်း၊ ခရစ်တော်ရှင်ကားတိုင်ထက်၌ အသေခံတော်မူခြင်းအကြောင်းကို သာ၍အလေးအမြတ်ထားစေပါသည်။
ဆင်ခြင်မိသောအခါ၌ ဒံယေလကျမ်းအခန်းကြီး ၂၊၇၊၈၊၁၁ တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ ရှုထောင့်အဖက်ဖက်မှ တိုင်းနိုင်ငံတို့၏ ဖြစ်တည်ပျက်သုဉ်းခြင်းအကြောင်းများ ဗာဗုလုန်၊ မေဒိပေရသိ၊ ဂရိ၊ ရောမ နှင့်ဘုရားရှင်၏နိုင်ငံတော်အစရှိ ယေရှုရှင်ပြန်လည်ကြွဆင်းလာပြီးနောက် ထာဝရတည် ရှိမည့်စကြဝဠာ အင်ပါယာကြီးအကြောင်းများကို စုံလင်စွာရေးသား ထားသည်။ ယနေ့အချိန် ကျွန်ုပ်တို့၏ရှုမြင်ချက်အရ၊ အသက်ရှင်နေထိုင်ရ ချိန်တွင် တိုင်းနိုင်ငံများဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပျက်သုဉ်းသွားနေရကြသည်။ ဒံယေလရေးသားထားသည့် ရောမအင်ပါယာသည် ကျန်ရှိတည်နေခဲ့သည်။ ယခု တွင် လည်း ကျန်ရစ် နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒံယေလ ၂း၃၃၊၄၁ အရ၊ ရုပ်တုကြီး ၏ခြေချောင်းခေတ်အထိ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ဥရောပတိုက်အစိတ်စိတ် အမြွှာမြွှာကွဲပြားသွားခဲ့ပြီ။ ရောမ အုပ်စိုးသော အသင်းတော်သည်ပင် တလူတမင်း ထပ်မံခွဲထွက်ပြန်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ကမ္ဘာ့ရာဇဝင်အနာဂတ်ရိုက်ထားသော တိကျသည့်ဖြစ်စဉ်များမှာ အချို့လူတို့သည် ဗာဗုလုန်ခေတ်၊ အချို့တို့မှာ ဂရိခေတ်၊ အချို့တို့မှာ ရောမခေတ်ဦးအချိန်တွင် နေထိုင်အသက်ရှင်ကြရသည်။
မည်သည့်ပုရောဖက်ပြုချိန်၌ နေထိုင်အသက်ရှင်ကြရစေကာမူ ဒံယေလသည် တိုင်းနိုင်ငံတို့၏ဖြစ်စဉ်ကို အမှန်အကန်ကြိုတင်ဟောထားနိုင် ကြောင်းကို မြင်ကြရသည်။ သို့ဖြစ်၍ နောက်ဆုံးပိတ်သူ၏အနာဂတ်ရိုက် ဟောကြားထားသော စကြဝဠာအင်ပါယာကြီးအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့မလွဲ မသွေယုံကြည်ရန်သာ ရှိတော့သည်။ ဘုရားသခင်၏ထာဝရနိုင်ငံတော်ကြီးသည် ယေရှုရှင်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာချိန်မှစ၍ အစဉ်အမြဲတည်ရှိလိမ့်မည်။
မှန်ပါသည်၊ ဒံယေလကျမ်းသည် တန်ခိုးပါပြီးတိကျခိုင်လုံသောအချက် အလက်နှင့်ပြည့်စုံလှသည်။ အထူးသဖြင့် မြော်လင့်ခြင်းအသင်းသူ၊ အသင်း သားများ ဒံ ၈း၁၄ ကိုအာရုံစိုက်လျက်၊ ”ယခင်ပြောသောသူက ရက်ပေါင်း နှစ်ထောင့်သုံးရာတိုင်တိုင်တည်လိမ့်မည်။ ထိုနောက် သန့်ရှင်းရာဌာနကို တစ်ဖန်ဆေး ကြောသုတ်သင်ကြလိမ့်မည်။” ဤကျမ်းချက်သည် ဒံ ရး၂၂၊၂၆၊ ၂ရ နှင့် အပြိုင်သဘောသက်ရောက်သည်။ ကောင်းကင်တရားပလ္လင်၌ စီရင် ချက်ချမှတ်ခြင်း ”အမြင့်ဆုံး သောဘုရား ရှင်၏သန့်ရှင်းသူများ” အတွက် ဘုရားသခင်သည် ထာဝရနိုင်ငံတော်ကို တည်ထောင်ပေးတော်မူသည်။ လောကီနိုင်ငံအင်ပါယာ များနှင့်မတူညီသော အချက်မှာ ထိုနိုင်ငံတော်သည် အစဉ်ထာဝရတည်မြဲခြင်းရှိတော်မူသည်။
ခရစ်တော်ရှင်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မည်မျှနီးကပ်စွာရှိတော်မူသည်ကို ရုပ်လုံးပေါ်လွင်စေပါသည်။ နေဗုခဒ်နေဇာမင်းအိပ်မက်ခဲ့ချိန်မှစ၍ ဒံယေလ ကိုယ်တိုင် ခြင်္သေ့တွင်းမှ လွတ်မြောက်လာသည့်အချင်းအရာတို့သည် ဒံယေလ ကျမ်းသည် ဘုရားရှင်၏နဂိုမူလဇာတိတော်အကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အနီး၌အစဉ်ရှိတော်မူသည်။ မင်းဆိုးမင်းယုတ် ဗေလရှာဇာကို ဒံယေလပြောကြားခဲ့သကဲ့သို့ ”ကိုယ်တော်၏အသက်သခင် တည်းဟူသော ကိုယ်တော်၏ အမှုအလုံးစုံ တို့ကို စီရင်တော်မူသောဘုရား” (ဒံ ၅း၂၃) ဟူ၍ဖြစ်သည်။
အကျဉ်းချုပ်ဆိုရသော်၊ ဒံယေလကျမ်းသည် ယခုကွာတာအတွက် ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာကြမည့်ကျမ်းဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ထောင်နှင့်ချီပြီး ရေးသားထားသော ကျမ်းတစ်ကျမ်းဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်တော်သခင်၏စာရိတ္တ တော်နှင့်မေတ္တာတော်အကြောင်းကို ခိုင်ခိုင်မာမာဖော်ပြသောကျမ်းတစ်ကျမ်း လည်းဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၈ – ဇန်နဝါရီ ၃
ဥပုသ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း ဒီဇင်ဘာ ၂၈
ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။ လုကာ ၂၄း၂၅-၂၇။ ၂ပေ ၃း၁၁-၁၃။ ယောန ၃း၃-၁ဝ။ တရားဟော ၁၄း၃၄။ ဒံ ၉း၂၃။ ၁ဝး၁၁၊၁၂။
”ဖိလိပ္ပုသည် ရထားသို့ပြေး၍၊ ပုရောဖက်ဟေရှာယ၏ကျမ်းစာ ၌ဖတ်သည်ကိုကြားလျှင်၊ ဖတ်သောအရာကိုနားလည်ပါ၏လောဟု မေးမြန်း၏” (တမန်တော် ၈း၃ဝ)။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတော်သည် ဒံယေလကျမ်းကိုဖတ်ရှုကျင့်ဆောင် ခြင်းဖြင့် အစပြုမွေးဖွားတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယခုကွာတာ၌ ယင်းအကြောင်း ကိုလေ့လာသွားရန်ဖြစ်သည်။ စတင်လေ့လာသည်နှင့် အောက်ပါအထောက် အကူဖြစ်စေသောအချက်အလက်များကို စိတ်ထဲထားရှိလိုက်လျှောက်ရန်လို ပါသည်။
ပထမတစ်ချက်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းသတိရနေရမည့်အချက် မှာ သခင်ခရစ်တော်သည် ဒံယေလကျမ်း၏ဗဟိုချက်မနေရာ၌ရှိကြောင်းနှင့် နှုတ်ကပတ်တော်တစ်အုပ်လုံးနှင့်လည်း သက်ဆိုင်နေကြောင်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် ဒံယေလကျမ်းသည် တစ်ကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန် များကိုစုစည်းရေးသားထားပြီး၊ အဓိကကျသောသတိချပ်စရာအမှုများကို နားလည်ခွင့်ရရှိရန် ကူညီသောကျမ်းဖြစ်သည်။
တတိယအချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သမားရိုးကျရေးသားဖွဲ့နွဲ့သော ပုရောဖက်ပြုချက်နှင့် ကမ္ဘာပျက်မည့်ဟောကိန်းများအကြား ခြားနားချက်ကို သိရှိရန်လိုသည်။ ဥပမာ၊ ဒံယေလ၏ပုရောဖက်ပြုချက်နှင့် ဟေရှာယ၊ အာမုတ်၊ ယေရမိတို့၏အနာဂတ္တိစကားများခြားနားချက်မျိုးဖြစ်သည်။
စတုတ္တအချက်အနေဖြင့်မှာ ဒံယေလပုရောဖက်ပြုသောအချိန်ကာလ နှင့်စပ်ဆိုင်သည့်အကြောင်းမှ ရှည်လျားသောကာလကြီးတစ်လျှောက်လုံးကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာကာ ရက်ကိုနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်သမုတ်ထားကြောင်းဖြစ်သည်။
ပဉ္စမအချက်မှာမူ ဒံယေလကျမ်းကို ပုရောဖက်ဟောကိန်းတစ်ခုအဖြစ် သာ မှတ်ယူခြင်းမပြုဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စီယနေ့အသက်ရှင်နေထိုင်မှုအဝဝ နှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်းကို ခံယူကျင့်သုံးရန်လိုသည်။
တနင်္ဂနွေ ဒီဇင်ဘာ ၂၉
လုကာ ၂၄း၂၅-၂၇။ ယောဟန် ၅း၃၉ နှင့် ၂ကော ၁း၁၉၊၂ဝ ကို ဖတ်ပါ။ ခရစ်တော်ရှင်သည် မည်ကဲ့သို့သောနည်းဖြင့် နှုတ်ကပတ်တော်၏ ဗဟိုချက်မဖြစ်ရပါသနည်း။
သခင်ယေရှုသည် အဘယ်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်၏အချက်အခြာ ဖြစ်ရသည်ကို မေးခွန်းထုတ်ရန်မလိုပါ။ ဒံယေလကျမ်းတွင်လည်း သခင် ယေရှုသည် အချက်အချာဗဟိုနေရာ၌ရှိသည်။ ဥပမာဆိုရသော်၊ အခန်းကြီး (၁) သည် အကန့်အသတ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမဖော်ပြနိုင်သေးသော်လည်း၊ ဒံယေလ သည် သခင်ခရစ်တော်အားဖြင့် တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရမှုကို မှတ်ချက်ပြုထားသည်။ ကောင်းကင်ရွှေနန်းကိုစွန့်ကာ ဤလောကအပြစ်နွံထဲ၌ကြီးစိုးနေသော မှောင်မိုက်၏အရှင်ကိုရင်ဆိုင်ရန်ရောက်လာသည်။ ထိုနည်းတူ ဒံယေလနှင့် အပေါင်းအဖော်တို့သည် ခရစ်တော်ရင်ဆိုင်ရမည့် အမှောင်ထုလွှမ်းမိုးသော ဗာဗုလုန်ထုံးစံဓလေ့မျိုးကို ရင်ဆိုင်ခံစားခဲ့ကြရသည်။ အခန်းကြီး (၂) တွင် နောက်ဆုံးကာလအချင်းအရာနှင့် လူလက်ဖြင့်မလုပ်သောကျောက်တုံးဟု တင်စားသည့် ခရစ်တော်၏နိုင်ငံတော်သည် လွန်သွားခဲ့သည့်တိုင်းနိုင်ငံ အလုံးစုံ၏နေရာ၌ ဝင်ရောက်နေရာယူမည့်အကြောင်းဖော်ပြထား၏။ အခန်းကြီး (၃) ၌ သစ္စာရှိအစေခံတို့နှင့်အတူ ခရစ်တော်သည် လောင်မြိုက်လျက်ရှိသော မီးဖိုအထဲမှာပင် အတူလျှောက်လှမ်းနေကြောင်းဖော်ပြသည်။ အခန်းကြီး (၄) တွင် နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးအား အချိန်အပိုင်းအခြားအကန့်အသတ် သတ်မှတ် ပေးခြင်းသည် မင်းကြီးအနေဖြင့် ”ကောင်းကင်ဘုံ၏ဥပဒေ” ကိုသဘောပေါက် စေရန်ဖြစ်သည်။ (ဒံယေလ ၄း၂၆)။ ထာဝရဘုရားသည် ကောင်းကင်မှ အုပ်ချုပ်လျက်ရှိသည်ကိုသတိပေးပြီး၊ ခရစ်တော်သည် ”လူသား” ဖြစ်ကြောင်း (ဒံ ရး၁၃) အတည်ပြုသည်။ နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု (ဒံ၊ ရ) ၌ဖော်ပြသည်။ အခန်းကြီး (၅) မှာ ဆိုးယုတ်သောမင်းဗေလရှာဇာအကြောင်း နှင့် ဗာဗုလုန်အင်ပါယာကြီး ညတွင်းချင်းရန်သူပါရှန်တို့၏လက်သို့ကျဆုံး သွားခြင်းကို ရေးသားထားသည်။ ရှုပ်ထွေးသောဗာဗုလုန်ကို မင်းလုပ်အုပ်ချုပ် သောစာတန်အား သခင်ခရစ်တော်နှင့်သူ၏ကောင်းကင်တမန်ဗိုလ်ခြေများ အပြီးသတ်ချေမှုန်းပစ်မည့် အတိတ်နိမိတ်အရိပ်ဖြစ်သည်။ အခန်းကြီး (၆) မှာ ဒံယေလထောင်ချောက်ဆင်ခံရခြင်းကဲ့သို့ မတရားစွပ်စွဲသောအသံများသည် ယေရှုရှင်တည်းဟူသော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီးကိုပင် မတရားစွပ်စွဲဆန့်ကျင် ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါရိမင်းကြီးသည် ဒံယေလကိုကယ်ထုတ်လိုသော်လည်း၊ မအောင်မြင်ပါ။ ထိုနည်းတူ ပိလတ်မင်းကြီးသည် ယေရှုကိုကယ်လိုသော် လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ (မဿဲ ၂ရး၁၇-၂၄)။ အခန်းကြီး (၇) မှာ၊ လူသားတော်သခင်ခရစ်တော်သည် မိမိ၏လူမျိုးကိုအုပ်စိုးရန် နိုင်ငံတော်၏ အာဏာကိုခံယူလိုက်ခြင်းအကြောင်း ရေးသားထားသည်။ အခန်းကြီး (၈) မှာ၊ ခရစ်တော်သည် ကောင်းကင်တဲတော်အတွင်း၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီး အဖြစ် အမှုတော်ဆောင်ရွက်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ အခန်းကြီး (၉) တွင်၊ သခင်ခရစ်တော်သည် မိမိကိုယ်ကိုယဇ်ကောင်အဖြစ် တင်လှူပူဇော် ခြင်းကြောင့် ဘုရားသခင်နှင့်သူ၏လူမျိုးအကြား ပဋိညာဉ်တရားသစ်ကို ပြန်လည်တည်စေခြင်းအကြောင်းဖော်ပြ၏။ ယင်းနောက်မှာ အခန်းကြီး (၁ဝ မှ ၁၂) အထိသည် ခရစ်တော်ရှင်သည် မိက္ခေလ၊ ကောင်းကင်တမန် တို့၏ ဗိုလ်ချုပ် အမိန့်ပေးပိုင်သူဖြစ်ပြီး၊ နတ်ဆိုး၏အင်အားစုကိုအောင်မြင်ကာ ဘုရားသခင်၏လူများအား သေမင်း၏ချုပ်နှောင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်စေသော တန်ခိုးတော်အရှင်ဖြစ်ကြောင်း တင်ဆက်ရေးသားထားပါသည်။ ထိုအကြောင်း များကြောင့် ခရစ်တော်ကိုဒံယေလကျမ်း၏အချုပ်အခြာဗဟိုချက်မဟု ကျွန်ုပ် တို့သတ်မှတ်ကြစို့။
ဒုက္ခပင်လယ်ဝေချိန်၊ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစားနေရသောအချိန် များတွင် ယေရှုရှင်ကိုအသက်တာ၏ဗဟိုချက်မအချုပ်အခြာ၌ထားရန် စိတ်ရှိ ပါသလား။ ထိုသို့ပြုရန်အလွန်အရေးကြီးကြောင်း အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ သိအပ်သနည်း။
တနင်္လာ ဒီဇင်ဘာ ၃ဝ
ဒံယေလကျမ်းကို ”အရမစ်” ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသည့်အပိုင်း များလည်းရှိသည်။ အခန်းကြီး ၂-ရ ကို ဟေဗြဲဘာသာနှင့်သော်လည်း ကောင်း၊ အရမစ်ဘာသာနှင့်သော်လည်းကောင်း ရေးသားထားခဲ့သည်။ အောက်ပါဖွဲ့စည်းရေးသားထားခြင်းများကိုလေ့လာကြည့်လျှင်၊ ကျမ်းတစ်ခုလုံး ၏အဓိကအချက်အချာ သတင်းစကား၏ကဏ္ဍကိုမြင်တွေ့ရမည်။
(က) နေဗုခဒ်နေဇာမင်းအိပ်မက်သောတိုင်းနိုင်ငံအင်ပါယာလေးခု (ဒံ၊ ၂)။
(ခ) ဒံယေလ၏အပေါင်းအဖော်များကို ဘုရားရှင်မီးဖိုအတွင်းမှကယ်နုတ်ခြင်း (ဒံ၊ ၃)။
(ဂ) နေဗုခဒ်နေဇာမင်းအပေါ်ကျရောက်သောတရားစီရင်ခြင်း (ဒံ၊ ၄)။
(ဂ) (ဆက်) ဗေလရှာဇာမင်းအပေါ်ကျရောက်သောတရားစီရင်ခြင်း (ဒံ၊ ၅)။
(ခ) (ဆက်) ဒံယေလကိုခြင်္သေ့တွင်းမှဘုရားရှင်ကယ်နုတ်ခြင်း (ဒံ၊ ၆)။
(က) (ဆက်) တိုင်းနိုင်ငံလေးခုအကြောင်းနှင့်ဆိုင်သော ဒံယေလ၏ရူပါရုံ (ဒံ၊ ၇)။
အဆိုပါစီစဉ်ရေးသားဖွဲ့နွဲ့ပုံကိုထောက်သော်၊ အချက်အချာကျသော အကြောင်းအရာမှာ အက္ခရာစဉ် (ဂ) နှင့် (ဂ ဆက်) မှ ဒံ၊ ၄ နှင့် ၅ သည် ဘုရားရှင်မှ နေဗုခဒ်နေဇာ၏ထီးနန်းကို ယာယီရွေ့သွားစေပြီး၊ ဗေလရှာဇာမင်းလက်ထက်ရောက်သောအခါ အပြီးအပိုင်အဆုံးစီရင်လိုက်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အခန်းကြီး ၂ မှ ရ သည်၊ ဘုရားရှင်မှလောကဘုရင်အပေါင်း တို့ကို အုပ်ချုပ်ထိန်းကျောင်းထား၍ အခွင့်ပေးလိုကပေးသည်။ အဆုံးစီရင် လိုသောအချိန်၌ စီရင်တော်မူကြောင်း သိသာထင်ရှားလှသည်။
ဘုရားရှင်သည် ပေးလိုသည့်သတင်းကိုထပ်ခါထပ်ခါပြန်၍ကြိုတင် သတိပေးတတ်ကြောင်း မြင်တွေ့ရသည်။ ဥပမာ၊ ဘုရားရှင်သည် ဖာရော မင်းအား အိပ်မက်နှစ်ကြိမ်တိတိ အဲဂုတ္တုပြည်၏အနာဂတ်နိမိတ်ကို ပြသပေး ခဲ့သည်။ (ကမ္ဘာဦး ၄၁း၁-၇)။ ပထမအိပ်မက်၌ ဆူဖြိုးသောနွားမခုနစ်ကောင် ကို ပိန်ချုံးလျက်ရှိသော နွားမခုနစ်ကောင်မှ မျိုချဝါးစားသည်။ ဒုတိယတစ်ကြိမ် မှ အသီးအောင်သောစပါးနှံခုနစ်နှံကို အဖျင်းအမှော်သာဖြစ်သည့်စပါးနှံခုနစ်နှံ မှမျိုချပြန်သည်။ အိပ်မက်နှစ်ခု၏ တာစူချက်မှာ တစ်နေရာတည်းမှာပင်ဖြစ် သည်။ ခုနစ်နှစ်ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်း၏နောက်ထပ်လိုက်လာသောခုနစ်နှစ်မှာ ဒုက္ခဆင်းရဲငတ်မွတ်ခြင်း အကြောင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဒံယေလကျမ်း၌ ဘုရားရှင်မှအကြိမ်ကြိမ်ထပ်ခါထပ်ခါသတိပေးခြင်း များကို ပြုတော်မူခဲ့သည်။ ပုရောဖက်ကြိုတင်ပြုထားသောအကြောင်းအရာ လေးခုကို ထပ်ခါထပ်ခါဖွဲ့နွဲ့ရေးသားထား၏။ အဆုံးပိတ်၏ဖွဲ့နွဲ့ရေးသားပုံ မှာ ဘုရားရှင်သာအရာခပ်သိမ်းကို ထိန်းကျောင်းအုပ်စိုးတော်မူကြောင်း အထင် အရှားပေါ်လွင်နေသည်။ မတူညီကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်ရူပါရုံများဖြင့် ပုရောဖက်ပြုချက်များရှိနေကြစေကာမူ၊ တူညီသောအချိန်ကာလနှင့်နောက်ဆုံး နေ့ရက်ကာလအတွက် ဘုရားရှင်မှ ပေးထား သောရူပါရုံ များသာဖြစ်ကြောင်း အောက်ပါဇယားကွက်ကိုလေ့လာခြင်းဖြင့် အဖြေမှန်ထွက်ရှိလာသည်။
See also ZSL 8: Huihpinung Tuipi pan Van Meei Tungah
ဒံ၊ ၂ ဒံ၊ ၇ ဒံ၊ ၈၊၉ ဒံ၊ ၁ဝ၊၁၂
မေဒိ၊ ပေရသိ မေဒိ၊ ပေရသတိ မေဒိ၊ ပေရသိ မေဒိ၊ ပေရသိ
ဟေလသ ဟေလသ ဟေလသ ဟေလသ
ရောမ ရောမ ရောမ ရောမ
ဘုရားရှင်၏ ကောင်းကင် ဗိမာန်တော်ကို မိက္ခေလအရှင်
နိုင်ငံတော် တရားစီရင် ဆေးကြော မတ်တတ်ရပ်
တည်ထောင်ခြင်း ခြင်းမှကမ္ဘာသစ် သန့်စင်ခြင်း တော်မူခြင်း
အောက်ပါပေးထားသောကျမ်းချက်များမှ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရှည်လျား သောမျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်အတွက် အဘယ်သို့အားထားနိုင်မည်နည်း။ ဒံ၊ ၂း၄၄။ ဆာလံ ၉း၇-၁၂။ ၂ပေ ၃း၁၁-၁၃။
အင်္ဂါ ဒီဇင်ဘာ ၃၁
ဒံယေလကျမ်းမှ ပုရောဖက်ပြုရူပါရုံများသည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှ ပုရောဖက်ပြုရူပါရုံနှင့် ခြားနားကွဲပြားခြင်းရှိသည်။ ဒံယေလသည် နောက်ဆုံး ကမ္ဘာပျက်ဟောကိန်းအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သော ပုရောဖက်ပြုချက်များကို ကြိုတင်ဟောကြားပြီး၊ အခြားသောဓမ္မဟောင်းခေတ်ပုရောဖက်များမှာမူ အနာဂတ်၌ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အကြောင်းအရာများကို ရေးသားဖွဲ့နွဲ့တတ်ခြင်းသာ ရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ကွဲပြားသောအခြေခံကွာခြားချက်ကိုနားလည်မှသာ သမ္မာကျမ်းစာ ၏အနာဂတ္တိဆိုင်ရာအကြောင်းကို ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်ပါမည်။
ကမ္ဘာပျက်ဟောကိန်းသည် သာမန်ဖွဲ့နွဲ့ရေးသားသောပုရောဖက်ပြု ခြင်းများထက် တစ်မူထူးခြားဖွင့်ဟပြောဆိုထားသည်။
ရူပါရုံများနှင့်အိပ်မက်များ။ ကမ္ဘာပျက်ဟောကိန်းနှင့်ဆိုင်သော အနာဂတ္တိပြုချက်၌ ဘုရားရှင်သည် ပုရောဖက်ကိုအချက်ကျသောအိပ်မက်နှင့် ရူပါရုံများကိုပေး၏။ ဖွဲ့နွဲ့ရေးသားသောပုရောဖက်စကားများမှာမူ ပုရောဖက်မှ ”နှုတ်တော်ထွက်စကားအားဖြင့်” ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ရူပါရုံနှင့်လည်းရရှိသည်။ ရေးသားဖွဲ့နွဲ့သောပုရောဖက်ပြုချက်အကြိမ်ပေါင်း ၁၆ဝဝ ခန့်ရှိသည်။
ဖွဲ့နွဲ့ပုံဆောင်မှုသဘော။ ရေးသားဖွဲ့နွဲ့သောပုရောဖက်ပြုချက်များ ၌ အကန့်အသတ်ပုံဆောင်မှုပြုချက်ထားရှိသည်။ အသက်တာ၌ အစစ်အမှန် ပုံဆောင်မှုကို အဓိကထားသည်။ ကမ္ဘာပျက်ဟောကိန်းနှင့်ဆိုင်သော ပုရောဖက် စကားများ၌မူ ဘုရားရှင်သည် လောကသားတို့၏နိစ္စဓူဝအသက်ရှင်လှုပ်ရှား မှုထက်ကျော်လွန်ကာ ပုံဆောင်မှုအရိပ်များကိုပေးလျက် ချိုနှင့်လည်းကောင်း၊ အတောင်များလည်းရှိသောသားရဲတိရစ္ဆာန်၊ နဂါးကြီး အစရှိသတ္တဝါများကို အသုံးပြုပုံဆောင်ပြသတတ်သည်။
ဘုရားရှင်အုပ်စိုးခြင်းနှင့်အခြေအနေအရအပေါ်မဟုတ်ဘဲ ဆောင်ရွက်ခြင်း။ ဖွဲ့နွဲ့ပိုင်းခြားရေးသားသော ပုရောဖက်ပြုချက်များသည် ဣသရေလ လူမျိုး များ တို့နှင့် ဘုရားရှင်ထားရှိတော်မူသောပဋိညာဉ်ကို လူသား များအလေးထားတုံ့ပြန်မှုပြုခြင်းဖြင့် ပြည့်စုံရခြင်းရှိသည်။ ကမ္ဘာပျက်ကိန်း ဟောထားချက်များ၌မူ အခြေအနေ အရ ပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်၍မရပါ။ ပျက်စီး ရမည့်အချိန်ရောက်မည်ဟု သတ်မှတ်ဟောထားသောပုရောဖက်ပြုချက်၌ အထူးသဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာမည့်ကမ္ဘာ့အင်ပါယာနှင့် ပြန်လည် ပျက်စီးသွားမည့် အချိန်ကို ဘုရားရှင်ဖော်ပြသည်။ ဒံယေလပုရောဖက်အချိန်မှစပြီး ကမ္ဘာ နောက်ဆုံးကာလအချိန်အထိ ကြိုတင်ဖော်ပြပြီးသားဖြစ်သည်။ ထိုအနာဂတ္တိ ဟောကိန်းမျိုးမှာ ဘုရားရှင်၏ကြိုတင်သိမြင်ထားသောဉာဏ်တော်နှင့် ဖော်ပြ သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း လူသားများတို့၏ ရွေးချယ်တုံ့ပြန်ခွင့်နှင့် မသက်ဆိုင် တော့ပါ။
ယောန ၃း၃-၁ဝ ကိုဖတ်ပါ။ ဖွဲ့နွဲ့ရေးသားထားသောပုရောဖက်ပြု ချက်၊ သို့မဟုတ် ကမ္ဘာပျက်ကိန်းဆိုင်ရာဟောကြားချက်ဖြစ်ပါသလား။ သင့်အဖြေကို ကိုယ်တိုင်ဆန်းစစ်ပါ။ ဒံယေလ ရး၆ သည် မည်သို့အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်ပါသနည်း။
ဖွဲ့နွဲ့ရေးသားထားသောဟောကိန်းနှင့် ကမ္ဘာပျက်ကိန်းဆိုင်ရာဟောကြား ချက်များကို ကျယ်ပြန့်စွာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းဖြင့် များစွာအကျိုးရှိလှ သည်။ ပထမအချက်အနေဖြင့် ဘုရားရှင်သည် ကွဲပြားခြားနားသော မတူညီ သည့်နည်းလမ်းများဖြင့် အနာဂတ္တိပြုချက်အစစ်အမှန်ကိုပြသရန် ချဉ်းကပ် ဆက်သွယ်လာသည်။ (ဟေဗြဲ ၁း၁)။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် ထိုသို့သော အသိဉာဏ်မျိုးသည် ကျွန်ုပ်တို့အား သမ္မာကျမ်းစာ၏လှပသေသပ်သော ဖော်ပြချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုပို၍နှစ်သက်မှုဖြစ်စေပါသည်။ တတိယအချက်မှာ ထိုအသိဉာဏ်ကပင် ကျွန်ုပ်တို့အား သမ္မာကျမ်းစာ၏အနာဂတ္တိအနက်များကို ဖော်နိုင်ရန်ကူညီပေးပြီး ကျမ်းစာမှရေးသားချက်အလုံးစုံကို သက်သေခံနိုင်ရန် နှင့် မှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်းလင်းပြောကြားပေးရန် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ ”သမ္မာတရား ကို မှန်ကန်စွာ ပိုင်းခြားတတ်သောသူ” ဖြစ်မည်။ (၂တိ ၂း၁၅)။
ဟောရှေ ၃း၄၊၅။ အာမုတ် ၈း၁၁ နှင့် ဇာခရိ ၉း၁ တို့၏အခြေခံ သဘောတရားအရ၊ အချို့ခရစ်ယာန်များ၏နားလည်မှုမှာ နောက်ဆုံးသော ကမ္ဘာပျက်ရမည့်ပြဿနာမှာ ကမ္ဘာ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှစတင်မည်ဟု ယုံကြည် ကြသည်။ ထိုအနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် အဘယ်ကြောင့်မှားယွင်းနေ သနည်း။ ဖွဲ့နွဲ့ရေးသားထားခြင်းဟောကိန်းနှင့် ကမ္ဘာပျက်ဟောကိန်း၏ခြားနား ချက်ကို ယင်းကိစ္စအားပိုင်းခြားလေ့လာခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့နားလည်နိုင် မည်နည်း။
ဗုဒ္ဓဟူး ဇန်နဝါရီ ၁
အခြားသဘောထားတစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲထားရှိရမည်မှာ ဒံယေလကျမ်းကိုလေ့လာရာတွင် ကမ္ဘာပျက်သုဉ်းကိန်းဟောထားချက်နှင့် သက်ဆိုင်သော ရာဇဝင်သမိုင်းကြောင်းကိုသုံးသပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ရာဇဝင်ကို သုံးသပ်ရာ၌ သမိုင်းအထောက်အထားအကိုးအကားကို အခြားအတိတ်နိမိတ် ကောက်ခြင်း၊ အနာဂတ် ကြိုတင်မှန်းဆခြင်းနှင့် အတွေးအခေါ်နှင့်ယှဉ်သော် ပို၍နားလည်နိုင်သည်။
အတိတ်တဘောင်၏ရှုထောင့်နှင့်ကြည့်လျှင် ဒံယေလကျမ်း၏ကြိုတင် ပြုသောပုရောဖက်ပြုချက်တို့သည် ရှေးအတိတ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟု သဘော သက်ရောက်၏။ အနာဂတ်ကြိုတင် မှန်းဆခြင်းသဘောသည်လည်း ဖော်ပြပါ ပုရောဖက်ပြုချက်များပြည့်စုံလာရန်စောင့်ဆိုင်းသည်ဟု သတ်မှတ်ကြပြန်သည်။ အတွေးအခေါ်ပိုင်း သဘောတရားအရ၊ ကမ္ဘာပျက်ဟောကိန်းဝိညာဉ်ရေးပုံဆောင် ချက်အစစ်အမှန်ဟုသတ်မှတ်ကာ နောက်ခံသမိုင်းရာဇဝင်ကြောင်းကို ထည့်၍ မစဉ်းစားပါ။
သမိုင်းအထောက်အထားသဘောအရ၊ ဘုရားရှင်ဖော်ပြသောကမ္ဘာ ကြီးပျက်သုဉ်းခြင်းဟောကိန်းသည် ပုရောဖက်များအချိန်မှ ကမ္ဘာကာလ နောက်ဆုံး အချိန်အထိ ရာဇဝင်တွင်ရှိလာရမည်ဟု အသေအချာခံယူသည်။ ဒံယေလကျမ်းကိုလေ့လာရာ၌ ကျမ်း၏အဓိကအချက်ကျသောရူပါရုံကို မြင်တွေ့ ရလိမ့်မည်။ (ဒံ၊ ၂၊၇၊၈၊၁၁)။ မတူညီသောရှုထောင့်ဖြင့် ရာဇဝင်ကြောင်းကို အဖန်တလဲလဲထပ်ခါထပ်ခါအသေးစိတ်ဖော်ပြသည်။ မြော်လင့်ခြင်းအသင်း တော်စတင်တည်ထောင်သူများ၌ Ellen G White အပါအဝင်ပုဂိ္ဂုလ်များတို့ သည် ဒံယေလကျမ်းနှင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်းကို သမိုင်းသုတေသီ၏ရှုထောင့်ဖြင့် နားလည်ထားကြသည်။
တောလည် ၁၄း၃၄ နှင့် ယေဇကျေလ ၄း၅၊၆ ကိုဖတ်ပါ။ ပုရောဖက်ပြုစကားအရ၊ ရက်တစ်ရက်ကိုမည်သည့်အချိန်နှင့်ပုံဆောင်ထား သနည်း။
ဒံယေလကျမ်းကိုလေ့လာရာတွင် ပုရောဖက်တိုင်းတာသောအချိန်ကို တစ်ရက်လျှင်တစ်နှစ်ဟု သတ်မှတ်သိရှိထားရန်လိုသည်။ ပုရောဖက်ပြုချက် အရ၊ တစ်နှစ်ကိုတစ်ရက်နှင့်ညီမျှမှုရှိသည်ဟု ရာဇဝင်များအရ မှတ်တမ်းပြု ထားကြောင်းသိရသည်။ ဥပမာဆိုရလျှင်၊ ၂၃ဝဝ ရက်ပေါင်း၏အနာဂတ္တိ အချိန်သတ်မှတ်ချက်၌ နှစ်ပေါင်း ၂၃ဝဝ ဖြစ်နေကြောင်း နားလည်လာရ သည်။ (ဒံ၊ ၈း၁၄)။ ထိုနည်းတူစွာပင် သီတင်းပတ် (၇ဝ) ပုရောဖက်ပြု ချက်အချိန်အကန့်အသတ်ကိုလည်း နှစ်ပေါင်း (၄၉ဝ) ဖြစ်နေကြောင်း နားလည်ရသည်။ (ဒံ၊ ၉း၂၄-၂၇)။
ထိုသို့အချိန်တိုင်းတာပုံမျိုးမှန်ကန်ရသည်။ အကြောင်းရင်းများမှာ (၁) ရူပါရုံ၏အဓိပ္ပါယ်သည် ပုံဆောင်ချက်ဖြင့်ပြသသည့်အတိုင်း အချိန် အကန့်အသတ်သည်လည်း ပုံဆောင်မှုပြုထားသည်။ (၂) ရူပါရုံမှရှည်လျား သောအချိန်ကာလများကြာမြင့်ပြီးမှ အချို့ကိစ္စများအတွက် အဆုံးသတ်အချိန် ၏ ဖော်ပြချက် ကိုဖွင့်ဟသည်။ အချိန်၏ကာလရှည်ကြာခြင်းကို ရူပါရုံ၏အနက် နှင့်ဒွန်တွဲဖွင့်ဟလေ့ရှိသည်။ (၃) တစ်ရက်အစားတစ်နှစ်သတ်မှတ်ချက်သည် ဒံယေလကျမ်း မှအတည် ပြု သတ်မှတ်ထားသည်။ ပိုမိုရှင်းလင်းသောသီတင်းပတ် (၇ဝ) ၏အနာဂတ္တိစကား၌ တွက်ချက်မှုပြုရာတွင် အာတေဇေရဇ်မင်းကြီး၏ အုပ်စိုးခြင်းအချိန်မှစပြီး၊ သခင်ယေရှုရှင် မေရှိယအဖြစ်ကြွလာချိန်အထိဖြစ် ကြောင်း တိကျစွာတွက်ချက်သိရှိနိုင်သည်။ ထိုကြောင့် အမှန်ကန်ဆုံး၊ အတိကျ ဆုံးအချိန်ကိုရယူနိုင်ရန် ဒံယေလကျမ်း ၌ ရေးသားထားသော ပုရောဖက်ပြုသော အချိန်ကာလ၏အနက်မှ တစ်ရက်ကိုတစ်နှစ်ဟုသတ်မှတ်ရမည်။
အချို့သောပုရောဖက်ပြုအချိန်၏အတိုင်းအတာမှာ နှစ်ပေါင်းရာနှင့် ထောင်နှင့်ချီပြီးကြာညောင်းသည်။ သည်းခံစောင့်ဆိုင်းသင့်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ကိုသွန်သင်ခြင်းဖြစ်ပါသလား။
ကြာသပတေး ဇန်နဝါရီ ၂
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၅ဝဝ ကျော်မှရေးသားထားသောကျမ်းပင်ဖြစ် သော်လည်း ယခုချိန် ၂၁ ရာစုနှစ်အထိ၊ ဖြစ်ပေါ်သောအကြောင်းအရာများ နှင့် ဒွန်တွဲသွားနေဆဲဖြစ်သည်။ ခေတ်နှင့်အညီဒွန်တွဲလျက်ရှိသောအကြောင်း ရင်းသုံးချက်ကို သတိပြုသင့်ပါသည်။
ထာဝရဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အသက်တာကိုအုပ်စိုးထား သည်။ မရေမရာလျှောက်လှမ်းသောလူသားများ၏ဘဝခရီးကို တည့်မတ်ပေး ရင်း၊ သားသမီးများအတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးနေသည်။ ဒံယေလ ၏ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော ဗာဗုလုန်မှအတွေ့အကြုံတို့သည် အဲဂုတ္တုမှယောသပ်၏ ဖြတ်သန်းခဲ့ရသောဘဝခရီး၊ ပါရှန်ပြည်မှဧသတာရင်ဆိုင်ခဲ့ရသောကိစ္စများနှင့် အလားတူပင်ဖြစ်သည်။ လူငယ်သုံးဦးစလုံးသည် ငယ်ရွယ်ချိန်မှာ ဘုရား အမှန်မသိသောတိုင်းတစ်ပါးသားတို့၏ဖမ်းဆီးကျွန်ပြုခြင်းကို ခံခဲ့ကြရသည်။ ဘုရားသခင်မှကာကွယ်မှုမပြု၊ စွန့်ပစ်ထားသည်ဟုထင်စရာရှိသည်။ မည်သို့ ပင်ဆိုပါစေ၊ ထာဝရဘုရားရှင်သည် ၎င်းတို့အားခွန်အားကိုပေး၍ ကြီးမား သောကိစ္စအကြောင်းများကို ဆောင်ရွက်စေခဲ့သည်။ စုံစမ်းခြင်းဒုက္ခပြဿနာ နှင့်ဆန့်ကျင်မှုများကြုံရစဉ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒံယေလ၊ ယောသပ်၊ ဧသတာ တို့၏သင်ခန်းစာကို ပြန်သတိရရန်လိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်သောဘုရားရှင် သည် သခင်တကာတို့၏သခင်အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း စွဲမြဲမှတ်ထားကြရန် အထူးအရေးကြီးလှသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ဒုက္ခနှင့်ကြုံတွေ့ရသော အချိန်၌ မည်သည့်အခါမျှကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်၍မပစ်ထားကြောင်းကို အသေအချာ စွဲမြဲမှတ်သားထားပါ။
ရာဇဝင်သမိုင်းကြောင်းကို ဘုရားရှင်ထိန်းကြောင်းမောင်းနှင်နေသည်။ လောကကြီးမှာ စိတ်ပျက်စရာနှင့်ပြစ်မှုများအလွန်ပြည့်နှက်သောကြောင့် ဆက်လက်အသက်ရှင်ရန်ဆန္ဒမရှိတော့သောအချိန်မျိုးရှိလာမည်။ သို့သော် ဒံယေလ၏သတင်းစကားကိုသတိရပါ။ အရာရာကိုဘုရားရှင်ထိန်းချုပ်ထား သည်။ ဒံယေလကျမ်း၏အခန်းတိုင်းအခန်းတိုင်းတွင်ပါရှိသောအချက်မှာ ထာဝရဘုရားသည် ကမ္ဘာ့သမိုင်းကြောင်းအလုံးစုံကို ကိုင်တွယ်မောင်းနှင် ကြောင်းဖော်ပြသည်။ အယ်လင်ဂျီဝှိုက်မှလည်း ”လူသားတို့၏သမိုင်းကြောင်း အစဉ်အဆက်အရ၊ တိုင်းနိုင်ငံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း၊ အင်ပါယာများဖြစ်တည် လာခြင်း၊ ပြိုလဲသွားခြင်းတို့သည် လူသားတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်ဟုအထင်ရှိ တတ်သည်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏အတွေးအခေါ်အယူအဆ၊ ဆုံးဖြတ် ချက်နှင့်အာဏာရှိမှု၊ စိတ်အားကြီးမှုကြောင့်ဟု အမြင်ရှိ၏။ သို့သော် နှုတ်ကပတ် ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲ၌ ကန့်လန့်ကာကြီးချထားသည်။ ထိုကန့်လန့်ကာ၏ အနောက်၌ အထက်မှထိုင်နေတော်မူပြီး လူသားများ၏စိတ်အစဉ်အလုံးစုံကို ထိန်းချုပ်ထားသူရှိနေပြန်၏။ ကရုဏာတော်တရားနှင့်ပြည့်စုံသောသူသည် တိတ်ဆိတ်စွာဖြင့် ငြိမ်သက်သည်းခံစိတ်ရှည်စွာဖြင့် မိမိ၏အလိုတော်အတိုင်း အကြံပေးတော်မူသည်။” Education p. 173.
နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကာလအတွက် ထာဝရဘုရားသည် မိမိ၏လူမျိုး များအတွက် ပြင်ဆင်မှုပြုတော်မူပါသည်။ ဒံယေလနှင့်အပေါင်းအဖော်များ သည် ကျမ်းစာသွန်သင်ချက်အတိုင်း ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများမြင်တွေ့နိုင်စေရန် အသက်တာကိုအကောင်းဆုံးပြသခဲ့သည်။ ဗာဗုလုန်တိုင်းပြည်ကြီး၏ဘာသာ ရေးနှင့်ညှိနှိုင်းပြီး ယုံကြည်မှုကိုပြုရန်၊ ထာဝရဘုရားကိုဆက်ကပ်ခြင်းအား ငြင်းပယ်ရမည်ဟု တွန်းအားပေးခံခဲ့ရသည်။ မည်သို့ပင်ဗာဗုလုန်၏တွန်းအား ပေးခြင်းကိုခံရစေကာမူ လုံးဝအလျှော့ပေးခြင်းမရှိ၊ ထာဝရဘုရားကိုသာသစ္စာ ရှိတည်ကြည်ခဲ့ကြသည်။ ထိုသူတို့၏သစ္စာရှိမှုနှင့်ဆက်ကပ်မှုအကြောင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အင်အားနှင့်ရဲရင့်စိတ်ကိုဖြစ်စေပါသည်။ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း ခြင်းခံရသည့်တိုင်၊ ဧဝံဂေလိတရားအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ဇွဲမလျှော့ကြပါ။ တစ်ချိန် တည်းမှာပင် ဒံယေလသည် အစိုးရမင်းများကိုလည်း ကောင်းစွာဆက်ဆံကူညီ ပြီး ဘုရားရှင်အပေါ်သစ္စာတည်မြဲခဲ့ပါသည်။
ဒံယေလ ၉း၂၃ ကိုဖတ်ပါ။ ဒံ၊ ၁ဝး၁၁၊၁၂ နှင့် မဿဲ ၁ဝး၂၉-၃၁ ကိုလည်းဖတ်ပါ။ အဆိုပါကျမ်းချက်များမှ ထာဝရဘုရားသည် ကျွန်ုပ် တို့ရင်ဆိုင်နေရသောအခက်အခဲပြဿနာများအားလုံးကို စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိ ကြောင်းကို မည်သို့ဖော်ပြထားသနည်း။
သောကြာ ဇန်နဝါရီ ၃
လူတို့သည် မိမိတို့၏ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန် သမ္မာ ကျမ်းစာမှလမ်းပြသွန်သင်ပေးသည်။ ထာဝရဘုရားသည် သေချာသောပုရောဖက် စကားများအားဖြင့် လူမျိုးတို့ကိုကြိုတင်သတိပေးထားသည်။ ကောင်းကင်တမန် များနှင့်ခရစ်တော်ရှင်ကိုယ်တိုင် ဒံယေလနှင့်ယောဟန်တို့ထံသို့ရောက်လာပြီး၊ အချိန်ကာလသည် လျင်မြန်စွာဖြတ်သွားမည့်အကြောင်း အသိပေးခဲ့သည်။ ယင်းကိစ္စသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းမဆုံးရှုံးရအောင် အလွန်အရေးကြီး သောသတင်းစကားဖြစ်သည်။ လျှို့ဝှက်နက်နဲချက်များလည်းပါဝင်၏။ အမှန် တရားအပေါ်သစ္စာရှိမြတ်နိုးသောသူများ လမ်းမလွဲသွားအောင် ညွှန်ပြပေး သောသတင်းစကားဖြစ်သည်။ ပုရောဖက်ဟဗက္ကုတ်အား ဘုရားရှင်မိန့်တော် မူချက်ကား၊ ”ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ဖတ်သောသူသည် ပြေးလျက်ဖတ်နိုင် အောင် ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကို သင်ပုန်းပေါ်မှာအက္ခရာတင်၍ရေးမှတ်လော့” (ဟဗက္ကုတ် ၂း၂)။ ဘုရားရှင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အတူ စိစစ်လေ့လာသူများအတွက် အလွန်မှပင်ရှင်းလင်းသည်။ အမှန်တကယ် ရိုးသားပွင့်လင်းစိတ်ရှိသူတိုင်း အမှန်တရား၏အလင်းကို ဧကန်မုချရရှိလိမ့် မည်။ ”အလင်းသည် ဖြောင့်မတ်သောသူတို့အဖို့ ပျိုးကြဲလျက်ရှိ၏” (ဆာလံ ၉ရး၁၁)။ အသင်းသားများမှ အမှန်တရားကိုဝှက်ထားသောဘဏ္ဍာကဲ့သို့ ရှာဖွေခြင်းမရှိသောအခါ၊ ထိုအသင်းတော်သည် သန့်ရှင်းသောတိုးတက်သော အသင်းတော်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ((Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 521, 522).
”ဒံယေလနှင့်အပေါင်းအဖော်များအကြောင်းကိုလေ့လာသောအခါ၊ နိစ္စဓူဝပတ်ဝန်းကျင်မှစုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းအစဉ်ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်း ထာဝရ ဘုရားကိုဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပြီး မိမိတို့ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ခဲ့ကြသည်။ မကောင်းမှု ဟူသရွေ့ကိုရှောင်ကြဉ်ပြီး ရန်သူတို့ဆင်ထားသောထောင်ချောက်လမ်းကို အစဉ် ငြင်းပယ်ရှောင်ရှားခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ထာဝရဘုရားရှင်မှအလွန် ကြွယ်ဝသောကောင်းချီးများချပေးပြီး ထိုသူတို့၏သစ္စာရှိတည်ကြည်ခြင်းကို ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်ဆုလာဘ်ပေးသနားတော်မူခဲ့သည်။ ((Ellen G. White, Manuscript Releases (No. 224) vol. 4, pp. 169, 170).
Tags: Downloads, MSL, SSNet
Prev post Zokam Sabbath School Sinna 1st Quarter 2020
Next post HSS 1: THU CHHIAR ATANGA HRIAT THIAMNA